Ogaden News Agency (ONA) – Kulan-dhexmaray Madaxda JWXO & Wasiirka Arrimaha Dibada Ee Itoobiya.
Kulan-dhexmaray Madaxda JWXO & Wasiirka Arrimaha Dibada Ee Itoobiya.
Posted by Daljir	/ February 1, 2019
wuxuu kulan dhex maray Wafti uu horkacayo Xogahayaha Guud ee Jabhada Wadaniga Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (JWXO) mudane C/raxmaan Sh Mahdi oo maanta Jimcihii la kulmay wasiirka arrimaha dibada ee dalka Itoobiya Dr. Workneh Gebeyehu.
Kulankan oo ka dhacay xarunta wasaarada arrimaha dibada ee Itoobiya ayaa waxaa lagaga wadahadlay dhammaystirka heshiiskii dhex-maray JWXO iyo dowlada Itoobiya iyo sidii loo qaban lahaa guddigii isku-dhafka ahaa ee heer federaal ee sii wadi lahaa qodobadii qabyada ka ahaa heshiiska.
Labada dhinac waxay si guud isugu afgarteen arrimihii ay ka wadahadleen, waxayna ku ballameen inay xoojiyaan wadashaqaynta iyo waliba sidii la isaga kaashan lahaa fulinta heshiiskii nabadeed ee labada dhinac dhex-maray.
Kulankan ayaa wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana la isku afgartay in si guud looga wada shaqeeyo amniga iyo hirgalinta heshiiskii dhawaan lagu kala sixiixday wadanka Eritrea.